Faux Fur dhende, Faux Fur Carpet, Faux nedehwe remakwai dhende, Wool dhende - Wenwen
Makwai ganda kapeti dhende
China kugadzira Wholesale Vechokwadi Australian ...
Customized yechando Luxury Real Long Fur Sheepsk ...
Home kushongedzwa faux nedehwe remakwai mbava dhende High quá ...
Fashion inopisa ikatengesa Eco noushamwari dzakaitwa nemaoko shinda makapeti
White kusimba chaise longue nedehwe remakwai pamutsago ...
Wholesale Australia nedehwe remakwai akaumbwa rose S ...
Real kuveurwa Wool nedehwe remakwai Car Seat Pads
Real nedehwe remakwai Wool Car Seat
Universal Full Set Long Fur nedehwe remakwai Car Seat ...
Mikuru chena shinda chakagadzirwa lambskin refu ...
A Mucheka Dete kuti sokunge hwemhuka mbava. Villi vari huviri akaturikidzana, kuruvanze rukoko ndiye chiedza uye gobvu ngaatarire bristles, yomukati rukoko wakanaka uye akapfava pfupi faibha. Chakagadzirwa mbava inowanzoshandiswa majasi, zvipfeko linings, heti, uketani, matoyi, nepanhovo, mukati Kushongedzwa uye nemakapeti. The kugadzira nzira zvinosanganisira knitting (weft knitting, yakarukwa knitting uye stitching) uye kurukiswa. The knitting weft knitting nzira ndiyo kukurumidza kuwedzera uye yainyanya ...
Kuiswa chisimbiso Strip
Chisimbiso kanyika zvisimbiso chinhu chimwe mhando, zvichiita hazvina nyore kuvhura, uye wakakurira ingaita nehana Absorção de Água, isapinda, mutsindo kuputira, kupisa kuputira, ekudzivirira guruva, uye Kuda kutamba. Zvisimbiso wakaumbwa rabha, bepa, simbi, mapurasitiki nezvimwewo zvakawanda. Sezvo 1980s, iro rabha chisimbiso rinoparadza vave kushandisirwa motokari, madhoo uye mahwindo, makabhati, sefiriji, midziyo nezvimwe maindasitiri. Maererano zvinodiwa maindasitiri akasiyana, ivo vakava akasiyana ...
The Freeway dzomumativi omugwagwa rinoumbwa vaviri chemarata simbi guardrails maviri mbiru fixedly clamped pakati zviviri. Nembiru maviri clamped pakati maviri chemarata simbi guardrails. Kana mugwagwa uri dzose oparesheni, asi dzomumativi omugwagwa inogona nyore akaiswa munzvimbo pre-akagadzawo kupinza gomba pamukova kudzivirira agopfigira dzomumativi omugwagwa kubva kunze mumugwagwa. Hazvina yunifomu akanaka. Kana motokari collides nayo, nokuti chemarata simbi dzomumativi omugwagwa ane Dhimoni Duku yakanaka ...
Color zvemapuranga bhodhi
Cai Tuban, anozivikanwawo sokuti ruvara ndiro, ruvara ndiro. Ruvara zvemapuranga simbi ndiro chakagadzirwa chando-akakungurutsirwa simbi yairema uye kwakakurudzira simbi yairema somunhu substrate, pasi dzinongobuda pretreatment (degreasing, kuchenesa, kemikari kutendeuka kurapwa), zvemapuranga ne kuramba nzira (chinotenderera unhani nzira), zvakabikwa uye haachandidi Products . The zvemapuranga simbi yairema ane chiedza uremu, chitarisiko uye wakanaka ngura nemishonga, uye zvinogona zvakananga kupatsanurwa. Rinotibatsira itsva mhando mbishi zvinhu ...
Maererano nenhamba kubva Hebei Metallurgical Industry Association, kubva January kusvika February 2018, chikuru mari yacho simbi bhizimisi iri Hebei Province akanga bhiriyoni 156.106 Currencykuva, rimwe gore pamusoro-gore Zvakaunganidzwa 5.03%, nekurangarira kuti 27.67% enyika makuru maindasitiri mabhizimisi mari; mubereko yaiva mabhiriyoni 9,84. Yuan, kuwedzera 53,76% gore pamusoro-gore, nekurangarira kuti 30,47% enyika kuti maindasitiri purofiti. Muna January-February nguva, mukuru mabhizimisi mari Ma ...